သတင်းပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 90
Yangon Press International မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူး စီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး အီတာလျှံထိုင်း ကုမ္ပဏီသင်္ဘောပေါ်တွင် တစ်ည အိပ်ခဲ့ကြောင်း စီမံကိန်းဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။ ထားဝယ်သို့ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်လေယာဉ်ဖြင့် လာရောက်သည့် သက်ဆင်သည် မတ်လ ၁၄ ရက် နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ထားဝယ်မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြောင်းလည်း ၎င်းဝန်ထမ်းက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။ “သက်ဆင်လာတယ်။ သင်္ဘောပေါ်တစ်ညအိပ်ပြီး ပြန်သွားတယ်။ ဒီတစ်ခါက ဒုတိယအခေါက်ပေါ့။ သူနဲ့ အတူ နောက်ထပ် လူကြီးနှစ်ယောက်ပါသေးတယ်။ ဘယ်သူလဲတော့ မသိဘူး “ ဟု မျက်မြင်တွေ့လိုက်ရသည့် စီမံကိန်း ၀န်ထမ်း...
ဝေမိုး (မြစ်မခ-ကျောက်ပန်းတောင်း) Myit Makha Mediagroup မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာများတွင်လည်း မဲစာရင်း လွဲမှားခြင်း ၊ မဲပေးနိုင်သည့် No tags for this post.
Yangon Press International မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၁၂တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လားရှိုးမြို့ ဟောပြောပွဲအတွက် ရန်တိုင်းအောင် ဆုတောင်းပြည့် မြို့ဦး စေတီ အနီးတွင် ပြင်ဆင်ထားသည် (ဓာတ်ပုံများ – ဆိုင်းဆွတ်/Yangon Press International) လာမည့် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး No tags for this post.
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း ရန်ပုံငွေပွဲအဖြစ် “ကာရာအိုကေ အဆိုပြိုင်ပွဲနှင့် တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အစားအသောက် ဈေးပွဲတော်” ကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ဌာနခွဲက မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ Tags: ကချင်
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၇ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို နေအိမ်များတွင် မချိတ်ရန် စစ်သားများကို ဧရာဝတီ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်ရှိ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဝင်းထွန်း ဆိုသူက ပြောဆို သတိပေးကြောင်း Youtube တွင် တွေ့ရသော ရုပ်သံဖိုင်အရ သိရသည်။ No tags for this post.
မိုးမခမိတ်ဆွေ၊ ဟိုပင်။ မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကချင်ပြည်နယ် ၊ ဟိုပင်မြို့နယ်ခွဲ ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က – ဟိုပင်မြို့၊ အရှေ့ကျောင်းကြီးတိုက်၊ လောကမာရ်အောင် ရွှေဘုန်းရောင်ဘုရားပွဲတော်တွင် ခင်းကျင်းရောင်းချနေရာ ည (၉း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် ဘုရားဂေါပကလူကြီးများဖြစ်ကြသော ဦးမင်းအောင်နှင့် ဦးအုန်းမောင်တို့နှစ်ဦးလာရောက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဆိုင်းဘုတ်စာတန်းကို ဖြုတ်ပေးရန်နှင့် ဖြုတ်ချမပေးပါက ဈေးရောင်းခွင့်ပိတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ဟိုပင်မြို့နယ်ခွဲ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးကျော်ငြိမ်းက မည်သူကဖြုတ်ခိုင်းသနည်း ဖြုတ်မချနိုင်ကြောင်း ဈေးဆိုင်လည်းမပိတ်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးခိုင်ထွန်းဇော်က အဖြုတ်ခိုင်းကြောင်း ပြောပြကြပါသည်။ ဦးကျော်ငြိမ်းကလည်း ဆိုင်းဘုတ်စာတမ်းဖြုတ်ချဖို့နှင့် ဆိုင်ပိတ်ပစ်ဖို့ တရားဝင်စာထုတ်ပြီးတားနိုင်က စာထုတ်ပေးပါလို့ ပြန်ပြောပြရာ သူတို့ ၂ ယောက် ပြန်ထွက်သွားကြပါသည်။ ခဏကြာသောအခါ...
ဇော်ဝင်းလှိုင်/VOA မတ် ၁၂၊ ၂၀၁၂ယခုလ ၅ ရက်နေ့က ရေနံချောင်းမြို့တွင် ဟောပြောနေသော မင်းကိုနိုင် (ဓာတ်ပုံများ – Burma VJ Media Network) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးအတွက် လက်တွေ့ကျတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ဆောင် ကြဖို့ အချိန် တန်ပြီလို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ No tags for this post.
by Yangon Press International on Friday,9March 2012 at 03:52 · ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ – CRPP ( ၁၉၉၀ ) အား အမည်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်ငွေသိမ်းကပြောသည်။ “ CRPP ဆိုတာဖွဲ့လို့မရတော့ဘူးလေ။ CRPP ကိုယ်စားပြုတဲ့လွှတ်တော်က လွန်သွားပြီ။ အဲဒီပုံစံလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ အခြားပုံစံတစ်မျိုးပြောင်း လုပ်ရမယ်” ဟု၎င်းကဆိုသည်။ CRPP အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးအေးသာအောင်ကလည်း ယခုအချိန်တွင် အခြေအနေများပြောင်းလဲလာသဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) ဟူသော နာမည်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုပါ ပြောင်းလဲရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲုတွင် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို...
Page 90 of 95«1...8889909192...95»
ကာတွန်းမင်းထက်လူရဲ့ အမှိုက်ပုံထဲထားခဲ့မယ် ထင်လို့လား … https://t.co/Uv4DamOkTz https://t.co/pN3n6yZWVN about 57 minutes ago ReplyRetweetFavorite